Rôma Taloha - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Roma Taloha)
I Rôma Taloha dia sady ny tanànan' i Rôma sy ny fanjakana naoriny tamin' ny Andro Taloha. Tsy afa-misaraka amin' ny an' ny kolontsaina latina ny hoe "Rôma Taloha". Izany fitangoronan-tanàna madinika tamin' ny taonjato faha-8 tal. J.K. izany dia afaka nanjakazaka amin' ny faritra mediteraneana mantolo sy amin' i Eorôpa Andrefana tamin' ny taonjato voalohany hatramin' ny taonjato faha-5 tamin' ny alalan' ny fakàn-tany nataon' ny miaramila sy tamin' ny alalan' ny fampidirana ny olomanga isan-toerana ho isan' ny vahoaka rômana. Namela sisan-javatra maro sy vavolombelona amin' ny asasoratra ny fanjakazakan' i Rôma. Mbola mamolavola ny sivilizasiona tandrefana i Rôma Taloha. Nandritra ireo taonjato ireo dia niainga avy amin' ny fanjaka-mpanjaka ka nankany amin' ny repoblika tantanan' olom-bitsy ary tamin' ny empira i Rôma.
Ny Kôliezea ao Rôma
Ny filazana an' i Rôma ho tanàna nandroso miandalana sy mitohy dia tsy mifanaraka tanteraka amin' ny fahasaro-drafitry ny zava-nisy marina. Ny tantaran' i Rôma dia tantaran' ny fitomboana mitohy: nandimby ny fandrosoana (izay niovaova hafaingana) ny fijanonana sy ny fihemorana koa indraindray. Ny Rômana anefa dia afaka namaha ireo fahasahiranana anatiny nateraky ny fakana tany nandritra ny Repoblika tamin' ny alalan' ny fanovana ireo andrim-panjakana repoblikana. Ny fanoren' i Aogosto ny Empira dia nanamarika ny fanombohan' ny vanimpotoana nahatraran' ny fakàn-tany rômana ny fetran' ny tontolo fantatra tamin' izany fotoana izany. Ny sivilizasiona rômana, izay niharan' ny foto-pisainan' ny Grika dia naharitra tao amin' ireo faritra nalainy. Nanomboka tamin' ny taonjato faha-3 dia nisedra ny fananiham-bohitra nataon' ny Barbariana avy any Eorôpa Avaratra sy avy any Azia ny Empira Rômana. Mba hanoherana izany dia nilain' ny Rômana ny famoronana rafitra vaovao miankina amin' ny mpandraharana ny empira sy ny miaramila. Nandritra izany toe-javatra izany no nahatanterahan' ny fanavaozana tamin' ny taonjato faha-4 sy ny fanaovana ny kristianisma ho fivavaham-panjakana.
Fivakisan' ny Empira Rômana ho roa tamin' ny taona 395.
Taorian' ny fisarahan' ny Empira Atsinanana sy ny Empira Andrefana tamin' ny taona 395 dia nisy fananiham-bohitra izay namarana ny Empira Andrefana tamin' ny taona 476.
Noho ny tsy fahamarinan-toeran' ny pôlitika anatiny sy noho ny fanafihan' ny vahoaka izay avy any Jermania ny ankamaroany, ny tapany andrefana amin' ny Empira (anisan' izany i Hispania, i Galia, i Britaina, i Afrika Avaratra ary i Italia) dia nivaky ho fanjaka-mpanjaka mahaleo tena maro tamin' ny fiafaran' ny taonjato faha-5. Ny tapany atsinanan' ny Empira kosa, izay notapahina avy tao Kônstantinôpla (anisan' izany i Grisia, i Anatôlia, i Siria ary i Ejipta) dia afaka niala tamin' izany fahasahiranana izany. Na dia very aza i Siria sy i Ejipta izay lasan' ny empira arabo silamo vao nisandratra, ny Empira Atsinanana dia nanohy ny fandrosoany, hatramin' ny namotehan' ny Empira Ôtômàna azy. Ity empiran' ny Andro Antenatenany sady kristiana ity, izay nantsoin' ny vahoaka ao aminy hoe "Empira Rômana", nefa antsoin' ny mpahay tantara ankehitriny hoe "Empira Bizantina" dia dingam-pivoarana farany, izay tsy nisy fitsaharany teo amin' ny fahefan' ny emperora sy ny fandraharahana ny Empira Rômana.
Ny sivilizasiona rômana dia matetika akambana amin' ny an' i Grisian' ny Andro Taloha, dia ilay sivilizasiona izay nisy akony tamin' ny ampahany be amin' ny kolontsaina tao Rôma Taloha. Ankoatra ny fakana tahaka ny fomba fampiasana ny fahefana, izay nalain' ny andriandahy maro tahaka na notahafiny, i Rôma Taloha dia nandray anjara lehibe tamin' ny famolavolana ny fanajana zo sy ny andrim-panjakana ary ny lalàna, ny famolavolana ny tetik' ady sy ny zavakanto sy literatiora, ny mari-trano sy ny haitao ary ny fiteny manetana ny tontolo tandrefana (dia ireo fiteny rômana).
Ejipta tamin' ny Andro Taloha
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rôma_Taloha&oldid=1011530"
Dernière modification le 16 Mey 2021, à 08:05
Voaova farany tamin'ny 16 Mey 2021 amin'ny 08:05 ity pejy ity.